Amatikiti amaxabiso aphantsi oQeqeshiso lwee-ICE kunye namaxabiso endlela yokuHamba | Gcina A Isitimela
Amatikiti amaxabiso aphantsi oQeqeshiso lwee-ICE kunye namaxabiso endlela yokuHamba
ekhaya > Amatikiti amaxabiso aphantsi oQeqeshiso lwee-ICE kunye namaxabiso endlela yokuHamba
Apha unokufumana lonke ulwazi malunga neJamani Amatikiti e-ICE ashibhile yaye Amaxabiso okuhamba e-ICE kunye nezibonelelo.
izihloko: 1. I-ICE ngamaNqaku oLoliwe
2. Malunga ne-ICE Train 3. Amagqabantshintshi aphambili Ukufumana itikiti lokuThengisa nge-ICE elishibhile
4. Axabisa malini amatikiti e-ICE 5. Iindlela zokuhamba: Kutheni le nto kungcono tThatha uloliwe we-ICE, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
6. Uyintoni umahluko phakathi kweCandelo eliMgangatho kunye neKlasi yokuQala kwi-ICE 7. Ngaba kukho ukubhaliswa kwe-ICE
8. Kude kube nini ukumka koololiwe be-ICE ukufika 9. Zithini iishedyuli zoqeqesho ze-ICE
10. Zeziphi izitishi ezihanjiswa yi-ICE 11. I-ICE Oololiwe FAQ
I-ICE ngamaNqaku oLoliwe
Olona loliwe lukhawulezayo eJamani lolona ICE ngesantya se-300km / hr.
Tuloliwe ophambili we-ICE wenkqubo kaloliwe waseJamani udibanisa zonke izixeko ngaphakathi eJamani.
Kuzo zonke izitimela ezihamba kwi Inkqubo kaloliwe yaseJamani, I-ICE yodidi A.
Oololiwe be-ICE bayilelwe ukukhuphisana neenqwelo moya ngokwentuthuzelo kunye nexesha lokuya kwindawo.
Iindlela zamanye amazwe ze-ICE zibandakanya iFrance, Bheljiyam, Dominikha, Ostriya , inetherlands, naseSwitzerland.
Malunga ne-ICE Train
I-Intercity-Express okanye kwi-shortcut name ICE yinkqubo ye oololiwe-high speed eyeyaseDeutsche Bahn, Umnikezeli kaloliwe wesizwe waseJamani. the Oololiwe be-ICE baziwa ngobutofotofo, isantya, kunye nentuthuzelo njengoko zixhuma yonke idolophu eJamani.
Ngesantya esiphezulu njenge-300km ngeyure, ukuhamba ngololiwe we-ICE yeyona ndlela ikhawulezayo yokuhamba phakathi kwezixeko ezikude njengeCologne neHamburg.
Iindlela zokuHamba ze-ICE akapheleli eJamani. Uloliwe ubaleka kwiindlela zamanye amazwe ukuya eOstriya, Fransi , Bheljiyam, Swizalend, Dominikha, kunye neNetherlands.
Yiya e Gcina iKhaya leLoliwe okanye usebenzise lewijethi ukukhangela oololiwe amatikiti oololiwe be-Ice
Amagqabantshintshi aphambili Ukufumana itikiti lokuThengisa nge-ICE elishibhile
inombolo 1: Bhuka amatikiti akho e-ICE kwangaphambili kangangoko unakho
Ukuba ungathanda ukufumana amatikiti asezantsi e-ICE, eyokuqala uyithengile, kokukhona amathuba akho okuba uzifumane ngexabiso eliphantsi. Nazi 3 Iindidi zexabiso eliphantsi le-ICE kwaye zontathu iintlobo zetikiti ziyafumaneka ngexesha lokuqala lokuthengisa, kodwa umsindisi uyahlawula, Ixabiso lokugcina, kunye ne-Super sparpreis isenokungafumaneki njengoko usuku lokuhamba lusondela. Ungawabhukisha amatikiti okugibela kodwa 6 iinyanga ngaphambi kokumka.
inombolo 2: Hlela iitikiti zakho ze-ICE xa uqinisekile malunga nohambo lwakho
Ukuqiniseka ngohambo lwakho kunye nomhla wokunduluka kuya kukugcinela imali kwimirhumo yokubuyisa. Ixabiso lokubuyiselwa kwemali kunye nenketho yokubuyisa amatikiti e-ICE angasetyenziswanga kuxhomekeke kuhlobo lwetikiti olithengileyo. kwakhona, Imali yokubuyiselwa kwemali isezantsi yetikiti lokugcina imali kunexabiso eliqhelekileyo. Qaphela ukuba i-DB ayinakubuyisela imali ezinkozo xa ubuya itikiti lakho. Ukubuyiselwa kwemali kwi-DB kwenziwa ngeevawutsha ze-DB, onokuyisebenzisa ukuhlawulela nayiphi na inkonzo abayinikezelayo. Ungathengisa eyakho Amatikiti kaloliwe e-ICE kwi-intanethi kwiiforamu ze-intanethi ukuba unqwenela ukuyifumana imali.
inombolo 3: Ukuhamba ngololiwe we-ICE ngexesha lokuhamba
Amatikiti e-ICE ashibhile ngamaxesha angenzi nto (uLwesibini, Ngolwesithathu, Ngolwesine, nangoMgqibelo). Ngeentsuku zencopho, amatikiti aphantsi athengisa ngokukhawuleza okukhulu, ishiya kuphela amatikiti e-Flexpreis. Ukuhamba ngeentsuku zePeki, bhuka kwangaphambi kwexesha ukufumana amatikiti okugcina ongezelelweyo. Ukuba awukwazi ukufumana amatikiti okuhamba esindisa, qiniseka ukuhamba phakathi kwentsasa kunye nasemva kwemini (ngenxa yabahambi beshishini) njengoko amatikiti eFlexpreis angabiza kakhulu ngelo xesha. Ekugcineni, kuphephe ukuqhubela phambili esidlangalaleni neeholide zesikolo njengoko amaxabiso etikiti le-ICE nawo aya kunyuka.
inombolo 4: Thenga amatikiti akho e-ICE kuKhuseleko loLoliwe
Uya kufumana okona kulungileyo ukunikela ngamatikiti kaloliwe e-ICE eYurophu kwiwebhusayithi yethu, Gcina A Isitimela. Esona sipho sikhulu samatikiti kaloliwe eYurophu nakwihlabathi. Unxibelelwano lwethu nenani labasebenzi bakaloliwe kunye nealgorithms elungileyo, sikunika amatikiti asezantsi e-ICE onokuze uwafumane. kwakhona, Sifumana ezinye iindlela ezinqabileyo zoololiwe ngaphandle kwe-ICE.
Axabisa malini amatikiti e-ICE?
Inani lentengo yetikiti le-ICE lixhomekeke kuhlobo lwetikiti kunye nodidi lwezihlalo ozifunayo. Ngokubanzi, kaloliwe German idume ngayo Amaxabiso etikiti eliphantsi le-ICE. Zintathu iintlobo zetikiti kuloliwe we-ICE- umgangatho osemgangathweni okanye itikiti leFlexpreis, amatikiti okugibela iSupersaver okanye iSupersparpreis, kunye nesaver yokuhamba okanye amatikiti eSparpreis ICE. Amatikiti okugcina ongezelelweyo ashibhile kuneetikiti ezisemgangathweni, kodwa amatikiti akhoyo anciphisa njengoko usuku lokuhamba lusondela. Ixabiso lamatikiti e-ICE kuxhomekeka kwiklasi oyikhethileyo kwaye nantsi itafile yesishwankathelo samaxabiso aphakathi kwiklasi nganye:
Imigangatho 17 € – 50 € 30 € – 120 €
Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukuthatha uloliwe we-ICE, kwaye ungahambi ngenqwelomoya?
1) Thintela iinkqubo zangaphambi kokugibela. Ukuba ubaleka ngenqwelomoya 9 am, ungcono ukuba kwisikhululo seenqwelomoya ubuncinci nge 7 ngenxa yexesha ekufuneka ukuba sele ungene ngalo kwiNkqubo yokuPhambi kweBhodi kunye nokuhlolwa kwezokhuseleko, Lisondele ixesha lokuba ukhwele kwinqwelomoya.
Kunye noololiwe ICE, Unokufika nangaliphi na ixesha ngaphambi kokumka logama nje usiya kuloliwe ngaphambi kokuba ushukume. Oku kunokwenzeka kuba akukho nkqubo zaphambi kokubhoda okanye ukujonga ukhuseleko olunomoya omde. Veza nje kwisikhululo, Khangela uloliwe wakho kwisalathisi, kunye nebhodi!
Lilonke ixesha lokuhamba, I-ICE iphumelele iinqwelomoya eJamani kanye njengokuba isenza ngexabiso ngokunjalo. I-Asides yexesha lokuchitha kwinkqubo ye-pre-boarding, iinqwelomoya zilahleka ngakumbi ixesha lokuhamba ekuhambeni (ukusuka kwisikhululo senqwelomoya ukuya kwindawo echanekileyo).
2) Imirhumo yeTyala. Unokuqiniseka ukuba uzakuhlawula ngaphezulu ngeesutikesi ukuba uhamba ngenqwelomoya. kunjalo, Ukuba uhamba ngoololiwe be-ICE ukuhlawula iifizi zemithwalo yindleko eyongezelelweyo awuyi kuyenza xa uthenga amatikiti etreyini amaxabiso aphantsi. Ukucacisa, nge amaxabiso e-ICE ashibhile, kuya kufuneka uhlawule nayiphi na i-suitcase ohamba nayo. Oko kwenza i-ICE ibe yindlela elula yokuhamba.
3) Oololiwe bayayithanda imeko-bume. the Uqeqesho lwe-ICE ikwanjalo ngakumbi okusingqongileyo kuneenqwelomoya, enegalelo kungcoliseko lomoya. Ukuhamba ngololiwe ngama-20 × ngaphantsi kwekhabhoni ekhupha ungcoliseko kunokuhamba ngomoya.
EBerlin eHamburg Uqeqesha
Bremen eHamburg Uqeqesha
Hanover eHamburg Uqeqesha
Cologne eHamburg Uqeqesha
Uyintoni umahluko phakathi kweCandelo eliMgangatho kunye neKlasi yokuQala kwi-ICE?
Ngokungafaniyo nabanye oololiwe abanetikiti leendawo ezahlukeneyo (esemgangathweni, ishishini, olawulayo, njl) njengaseTrenitalia, I-ICE yaseJamani yahlukile kancinci. Zimbini iiklasi kuqeqesho ngalunye lwe-ICE- iklasi yokuqala kunye neklasi yesibini. Umahluko ophambili kuzo zombini ezi ndidi lixabiso, ukuguquguquka, kunye neenkonzo ezinikezelwayo.
Njengoko ichaphazela amatikiti kunye neeklasi zecandelo loqeqesho lwe-ICE, naluphi na uhlobo lwetikiti lube kwinqanaba lokuqala. Oku kuthetha ukuba nkqu amatikiti etreyini amaxabiso aphantsi, ixabiso lokugcina, kunye neSuper sparpreis inokuhlawula izihlalo zeklasi yokuqala. kunjalo, ixabiso liyahluka kuzo zombini iiklasi, njengoko kubonwe ngasentla.
Amatikiti okuqala e-ICE:
Udidi lokuqala lwe-ICE lubeka umgangatho wokunethezeka, intuthuzelo, kunye nenkonzo ebalaseleyo kwinkqubo kaloliwe yaseJamani. Yenzelwe ukuba neenqwelo moya, Oololiwe be-ICE babonelela ngentuthuzelo kuhambo olude. Ngaphezu, amacandelo okuqala enza malunga nesinye kwisithathu kaloliwe kwaye anokubanamalungu amathathu ngokuxhomekeke kuloliwe we-ICE.
Izitulo ezikwigumbi lokuqala zinkulu kwaye zilungelelaniswe ngokwahlukileyo a 2-1 ulungiselelo endaweni yokuba 2-2 kwiklasi yesibini. Kwaye oku kukhulula indawo engaphezulu yabakhweli. Ngaphezu, izihlalo ezikwiklasi yokuqala ye-ICE nazo zigutyungelwe ngesikhumba sefeksi kwaye zinkulu kunezo zeklasi yesibini. Njengabantu abashishini ngesiqhelo basebenzisa iklasi yokuqala, kukho iitafile eziqinileyo ezikhoyo zabakhweli abafuna ukwenza umsebenzi othile ngelixa besendleleni.
Iinkonzo ezongezelelweyo ezahlula iklasi yokuqala kwiklasi yesibini koololiwe be-ICE zibandakanya simahla, amaphephandaba emihla ngemihla, simahla i-WI-FI engenasiphelo, kunye neeamplifikhi ezikhethekileyo ukuthintela ukuphazamiseka kulwamkelo lweselula. Abakhweli beklasi yokuqala banoku-odola izidlo zabo kwizihlalo zabo ukuba abafuni ukuya kwindawo yokutyela ekhwele uloliwe.
Enye i-perk ethintelwe kubahambi be-ICE bokuqala isihlalo ndawo. Onke amatikiti enqanaba lokuqala, kubandakanya amatikiti asezantsi e-ICE, Yonwabele le nzuzo. Awunakukhathazeka malunga nokufumana ngokungafanelekanga isihlalo sefestile; Ungasikhetha isitulo osifunayo ngelixa ubhukisha kwaye usigcinile.
I-Offenburg iya kwiFreiburg yamaXabiso oLoliwe
IStuttgart esiya kuFreiburg Amaxabiso oLoliwe
ILeipzig ukuya eFreiburg amaXabiso oLoliwe
ENuremberg ukuya kwiFreiburg Amaxabiso oLoliwe
Amatikiti eSibini e-ICE:
Amacandelo oDidi lwesibini akakho kude kakhulu kwiKlasi yokuqala kwintuthuzelo. Ukwengeza, izihlalo kwigumbi lodidi lwesibini zibhetele kunezihlalo zeenqwelo moya. Plus, zi-ergonomic, yiza nentloko, kwaye zigqunywe kwilaphu elinefomathi. Oku kwenza ukuba uhambe uhambo olude lomgama.
Kukho amagumbi odidi lwesibini ngololiwe we-ICE kunakwiklasi yokuqala. ngakumbi, ulungelelwaniso lokuhlala kwiklasi yesibini luthile kancinci kunolo lwegumbi lodidi lokuqala. Kukho izitulo ezine kumqolo ngamnye (2-2 ulungiselelo lwesihlalo), nezihlalo ezibini zokwabelana nge handrest eziphakathi.
Further, abakhweli kwiklasi yesibini banokufikelela kwezinye zeenkonzo kwiklasi yokuqala kodwa benemida. Thatha iWI-FI umzekelo. Kwiklasi yesibini, I-Wi-Fi ayinamkhawulo njengoko injalo kubahambi beklasi yokuqala. Abakhweli abakumgangatho wesibini nabo abanako ukufikelela kumaphephandaba emihla ngemihla ngaphandle kwentlawulo ke ukuba ungathanda ukufumana iphephandaba kwiklasi yesibini, Kuya kufuneka uthenge enye.
Abakhweli abakumgangatho wesibini kufuneka baye kwindawo yokutyela ukuba bafuna uku-odola. Abakwazi uku-odola kwizihlalo zabo njengoko kunjalo kwigumbi lokuqala le-ICE. kwakhona, Amatikiti e-ICE odidi lwesibini kuzo zombini iFlexpreis kunye neefizi zokugcina imali azigqibi ukubhukisha izihlalo ngokuzenzekelayo. Ukuba ungathanda ukugcina isihlalo kwiklasi yesibini, Kuya kufuneka uhlawule imali eyongeziweyo ye- € 6. Ngokufanayo bobabini abaDidi lokuQala kunye naBakhweli baKlasi besiBini banendawo yokuphuma yombane kuzo zonke izihlalo.
Nuremberg ku Bamberg Uqeqesha
Frankfurt ku Bamberg Uqeqesha
Stuttgart ku Bamberg Uqeqesha
Dresden ku Bamberg Uqeqesha
Ngaba kukho ubhaliso lwe-ICEIsifundo?
I-ICE ibonelela ngokudlula koololiwe e Amaxabiso aphantsi oqeqesho lwe-ICE yokuhamba okungasikelwanga mda kuyo yonke iJamani okanye iYurophu. Zintathu iindlela zokudlula koololiwe:
IJamani Rail Pass
Ukudlula koololiwe baseJamani kukhenketho olungenamkhawulo ngaphakathi eJamani. kwakhona, yenzelwe abahambi abangahlali eYurophu, ikarikuni, kunye neRussia. Izibonelelo ezimbalwa zePasi yoLoliwe yaseJamani zibandakanya:
Abaphethe ukugqithiswa kukaloliwe bangandwendwela iindawo ezithile zebhonasi ngaphandle kweJamani (Salzburg, Venice, no Brussels)
Amatikiti e-ICE esaphulelo kuwo wonke umntu ongaphantsi 28 iminyaka
Ukuhamba okungasikelwanga mda kuyo yonke iJamani
Abantu ababini banokonga imali eninzi ngokusebenzisa iTwin Pas xa behamba kunye
Ukuguquguquka kwezinto kuvumela ukubanjwa kwejamani yaseJamani ukuba ihambe nangaliphi na ixesha
Izibambiso zokudlula kweJamani zinokukhetha kuzo 3 ukuba 15 Iintsuku zokuhamba ngokulandelelana ngaphambi kwenyanga xa uthenga ipasi.
Ukugqitha kwi-Eurail kuvumela abantu abangengabo baseYurophu ukuba bahlale ngaphandle kweRussia, Europe, kunye neTurkey yokuhamba ngokungapheliyo kwiYurophu. Ezinye izinto zibandakanya:
Iivawutsha kunye nezaphulelo zokutsala abakhenkethi.
Iindidi ezahlukeneyo onokukhetha kuzo - Abantu abadala, Umdala, noLutsha.
Ukuhamba ngokungasikelwanga mda 31 amazwe aseYurophu, kubandakanya iTurkey.
I-InterRail idlulisa izibonelelo kubantu abahlala eRussia, ikarikuni, okanye iYurophu yokuhamba ngokungapheliyo kwiYurophu iphela. Iiprayimenti zokudlula zibandakanya:
Izaphulelo zivuliwe Amatikiti kaloliwe e-ICE kubantu abancinci nabadala.
Ukuhamba okungasikelwanga mda ukuya 33 amazwe aseYurophu
Ukuhamba ngesitimela samahashe kubabambisi bePasi abahamba ukuya kuthi ga kubini abantwana abaphantsi 11 iminyaka.
Ixesha lokuhamba kwe 3 iintsuku ukuya 3 iinyanga umntu ngamnye.
Ukudlula ngalunye kuyafumaneka kwaye kufuneka kusebenze ngaphakathi 11 iinyanga zokuthenga.
Salzburg ku Passau
Kude kube nini ukumka koololiwe be-ICE ukufika?
Ukuqinisekisa ukuba ufike ngexesha oza kukhwela kulo, hlala phantsi uzinze, kwaye nkqu khangela iivenkile, ucetyiswe ukuba ufike okungenani 30 imizuzu ngaphambi kwexesha lakho lokuhamba.
Zithini iishedyuli zoqeqesho ze-ICE?
Iishedyuli zoololiwe azilungiswanga, eyenza ukuba kube nzima ukuphendula. kunjalo, ungafikelela kwiishedyuli zoololiwe ze-ICE ngexesha lokwenyani kwiphepha lasekhaya eligcina uqeqesho. Faka imvelaphi yakho kunye nendawo oya kuyo kwaye ufumane ukufikelela kwangoko kuzo zonke iishedyuli zoqeqesho ze-ICE. Uloliwe wokuqala we-ICE uhamba 6 am, noololiwe beshiya yonke 30 imizuzu ukuya kwiindawo eziphambili.
Zeziphi izitishi ezihanjiswa yi-ICE?
Iindlela ze-ICE zamanye amazwe zisuka kwizikhululo zamanye amazwe, phakathi kwabo kukho IBrussels Midi Zuid (Isikhululo saseMzantsi Brussels Midi ngesiNgesi), I-Arnhem Central, kunye neAmsterdam Central, kunye nezinye ezininzi.
Ukufika, Oololiwe be-ICE fika ku 11 Izikhululo zaseJamani kunye nesikhululo esinye seSwitzerland. kwakhona, Izikhululo zokufika eziphambili zibandakanya i-Oberhausen, IDuisburg, Dusseldorf, Cologne, Isikhululo senqwelomoya saseFrankfurt (Isikhululo senqwelomoya esikhulu saseFrankfurt), Manheim, Siegburg, kunye nabanye.
Further, IDusseldorf sisixeko esihle esikwiRhine esinembali etyebileyo yenkcubeko kunye nokuziva. Zininzi izinto ezinomdla zenkcubeko kunye nembali ezinokubonwa kwaye imizila ebukekayo ukuhamba kunye nendawo enkulu yokuthenga. Yindawo efanelekileyo ye impelaveki ibalekile nabahlobo okanye usapho.
Ukusuka kwiAmsterdam Central (ICentraal iseDatshi kwaye ithetha iSitishi esiPhakathi), ungafika eFrankfurt, Isixeko esaziwa njenge-capital yaseYurophu. Yintoni egqithisile, nazi esimhlophe amahle, olondolozo lwembali, kunye neeresityu zokundwendwela.
I-Cologne liziko lobugcisa, bokwakha, yaye ubutyebi bembali. Ngololiwe we-ICE osuka eAmsterdam Centraal, ungafika eCologne uzokuntywilisela kubuhle besi sixeko.
Kanjalo, kukho iigadi ze botanic ezintle ezintle, Iivenkile zokutyela ezinoluhlu olubanzi lwezinto eziphambili zobugcisa, Zoo, olondolozo lwembali, Iipapasho ziyonwabisa. kwakhona, ukuba awuqinisekanga ngesona sikhululo sikhethiweyo, i-algorithm yethu iya kukunceda ukhethe.
Frankfurt ku eHeidelberg Uqeqesha
Stuttgart ku eHeidelberg Uqeqesha
Nuremberg ku eHeidelberg Uqeqesha
Bonn ku eHeidelberg Uqeqesha
I-ICE Oololiwe FAQ
Yintoni endimele ndiyizise kwi-ICE?
Ngaphandle kwakho? Yiza kuxwebhu lwakho lokuhamba, ipaspoti esebenzayo, kwaye i-inshurensi yokuhamba ayinyanzelekanga kodwa olu xwebhu lulungile kwimpilo yakho.
Yeyiphi inkampani eye-ICE?
I-Intercity-Express (ICE) ungumnikezeli woqeqesho lukazwelonke waseJamani, iDeutsche Bahn, kwaye i-DB yeyaseburhulumenteni kuRhulumente waseJamani.
Ndingaya phi ne-ICE?
I-ICE ngokuyintloko ihamba kuzo zonke izixeko zaseJamani. Kukho amanye amazwe ICE iindlela zokuhamba kwamanye amazwe asemngceleni weJamani.
Zithini iinkqubo zokubhoda zoololiwe be-ICE?
Akukho zinkqubo zokukhwela zinqabileyo. Xa ufika kwisikhululo, Jonga iibhodi zeesalathiso ukuze ufumane uloliwe wakho. Ngaphezu, ungakhwela kuloliwe nangaliphi na ixesha ngaphambi kokuba ucwangciselwe ukuhamba.
Zeziphi iinkonzo ezikhoyo kuloliwe we-ICE?
Ukuqeqeshwa kwe-ICE kwindawo yokutyela apho imenyu iqulethe ukutya, ukutya okulula, notywala bazo zonke iintlobo. Ngaphezu, kukho amachweba okutshaja ecaleni kwesihlalo ngasinye, free WiFi (engenamda kwiKlasi yokuQala), kunye nee-amplifera zokwamkela iifowuni ezingafumanekiyo (yeklasi yokuqala).
Eyona nto iceliweyo ye-ICE FAQ – Ngaba kufuneka ndibhukishe isitulo kwangaphambili kwi-ICE?
Akunyanzelekanga ukuba ubhukishe isihlalo kwangaphambili, kodwa unokwenza indawo yokubhuka ukuba uyafuna. Ukuba uthenga itikiti lodidi lokuqala, ngokuzenzekelayo ulungele isihlalo esigciniweyo sasimahla.
Ngaba kukho i-intanethi ye-WiFi ngaphakathi kwe-ICE?
Ewe, Nantsi lapho. Kwigumbi lesibini leKlasi, I-intanethi ye-WI-FI isimahla kodwa ayinasiphelo njengoko injalo kwiklasi yokuqala.
Konstanz ku Lindau Uqeqesha
Memmingen ku Lindau Uqeqesha
Biberach ku Lindau Uqeqesha
Ulm ku Lindau Uqeqesha
Ekugcineni, Ukuba ufikelele ngoku, uyazi yonke into ekufuneka uyazi malunga noololiwe be-ICE kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho lohambo lwe-ICE SaveATrain.com.
Ngaba uyafuna ukumisela eli phepha kwindawo yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-ice%2F%0A%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela), Okanye unokuxhuma ngqo kweli phepha.